Nepal Dayari | श्रीमान र दाईको यति धेरै माया, जब उर्मिलालाई बिदाई गरियो……. ( भिडियो सहित )
श्रीमान र दाईको यति धेरै माया, जब उर्मिलालाई बिदाई गरियो……. ( भिडियो सहित )
चैत्र ८, २०७८ मंगलबार ३३५ पटक हेरिएको
छात्रालाई यौ’न दु’र्व्य’वहार ग’रे’को आ’रोप लागेका शिक्षक मनोज पौडेललाई विद्यालयमै प्र’हरीले सुरक्षा दिएर राखेको थियो। तर स्थानीय प्र’हरीको टोलीले मात्रै उनलाई विद्यालयबाट निकालेर प्रहरी कार्यालय लेटाङ लैजान सकेन। प्रदेश नं १ गणबाट थप मद्दतका लागि टोली मगाएर शिक्षक पौडेललाई लैजाने तयारी भयो। प्र’हरी जवान उर्मिला श्रेष्ठ पनि गणबाट लेटाङ जाने टोलीमा परिन्। उनी अढाई वर्ष पहिले मात्रै प्र’हरी जवानमा भर्ती भएकी थिइन्। खोटाङको फाक्टाङकी उर्मिलाको पहिलो पोस्टिङ त्यही गणमा भएको थियो।
एक वर्षअघि मात्रै उदयपुरमा उनको विवाह भएको थियो। उनका श्रीमान् नवीन श्रेष्ठ पनि प्र’हरी जवान नै हुन्। उनी जिल्ला प्र’हरी कार्यालय इलाममा कार्यरत छन्। उर्मिलाका दाजु–भाउजू पनि प्रहरी नै हुन्। दाजु भुवन श्रेष्ठ प्र’हरी सहायक निरीक्षक (असई) हुन्। उनी पनि मोरङकै बख्रिन चौकीमा कार्यरत छन्। भाउजू मीना जवान हुन्। उनी जिल्ला कारागार (मोरङ) मा कार्यरत थिइन् । प्र’हरी जवानमा उत्तीर्ण भएपछि उर्मिलाको पहिलो पोस्टिङ नै मोरङको रानीस्थित १ नं गणमा भएको थियो।
उनी त्यहाँ दुई वर्षदेखि कार्यरत थिइन्। तर आइतबार छात्रालाई दु’र्व्य’वहार गर्ने शिक्षकलाई विद्यालयबाट सुरक्षितसाथ निकाल्न खोज्दा आफू मा’रि’इन्। शिक्षकलाई विद्यालयबाट बाहिर निकाल्न खोज्दा झ’ड’प भयो। स्थानीयको भीडले आ’क्र’म’ण गर्‍यो। अरू भा’गेर जोगिए। तर उर्मिलाको घाँटीमा प’टकप’टक च’क्कु प्र’हा’र भयो। उनी त्यहीँ ढ’लिन्। अरू १७ जना प्रहरी पनि स्थानीयको ढुं’गा’मुढाबाट घा’इते भए। तर उनीहरूको अवस्था सामान्य नै छ। सबै घाइतेलाई कोसी अस्पताल लगियो। उर्मिलालाई भने कोसी अस्पतालले राति १०:५० बजे मृत घोषणा गर्‍यो।
फागुपूर्णिमाका दिन छात्राको घरमा पुगेका शिक्षक पौडेलले यौ’न दु’व्र्यव’हार गरेको पी’डितको भनाइ छ। पीडितले उक्त कुरा अभिभावकलाई सुनाएकी थिइन्। उनले आइतबार बिहान विद्यालयका साथीहरूलाई घ’टनाको विवरण सुनाइन्। विगतमा पनि शिक्षक पौडेलले छात्राहरूलाई यौ’न दु’र्व्यव’हार गरेका कारण साथीहरूले उजुरी दिन सल्लाह दिए। पी’डितले आइतबार साढे १० बजे प्रधानाध्यापक लक्ष्मीप्रसाद मिश्रलाई पौडेलविरुद्ध कार’बाहीको माग गर्दै निवेदन दिइन्।
आइतबार साढे १२ बजे छलफलका लागि पुगेकी उपमेयर निरौलाले मिलापत्रको प्रयास नगरेको बताइन् । आफू पुग्दा विद्यालयको माहोल खराब भएका कारण प्रहरीले सुरक्षा दिएर राखेको उनले बताइन् । ‘दु व्य र्व हा र को उ’जुरी गरेपछि विद्यार्थी, साना कक्षाका विद्यार्थीलाई टिफिन लिएर आएका आमा हुँदै गाउँमा हल्ला फैलियो,’ उनले भने, ‘आ’न्दो’ल’न बढ्दै गएपछि बाहिरबाट पनि मान्छे बो’ला’इए, त्यसपछि घ’टना नियन्त्रण बाहिर गयो ।’ आइतबार दिउँसोसम्म सामान्य रहेको घटनाले भने बेलुकाबाट राजनीतिक रूप लिएको थियो ।
छात्राको निवेदनपश्चात् अन्य शिक्षकले पौडेलसँग सोधपुछ गरे। आ”रोपित पौडेलले प्रमाण के छ ? भन्दै ‘थ’र्का’उन था’ले’पछि शिक्षकहरू कक्षामा पढाउन गएनन्। त्यसपश्चात् यो घ’टना विद्यालयका सबै विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय आमा समूह हुँदै गाउँभरि फैलियो। बिहान सुरु भएको विषयले दिउँसोसम्म उ’ग्र रू’प लि’ए’को थियो। प्रधानाध्यापक मिश्रले दिउँसो लेटाङ नगरपालिकाकी उपमेयर कृष्णकुमारी निरौला र विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षसमेत रहेका लेटाङ–५ का वडाध्यक्ष भूमसूर्य मगर, विद्यालयका अन्य शिक्षक र आरोपितलाई राखेर छलफल सुरु गरे। छलफलमा उपस्थितहरू दुई पक्षमा विभाजन भए।
अहिले प्रशासनले त्यस क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लगाएको छ। प्रहरीलाई आ’क्र’मण गर्नेको पनि खोजी भइरहेको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। १२ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरि सकेका छन्। घटनामा सं’ल’ग्न अरूको पनि प्र’हरीले खोजि गरिरहेको छ । शिक्षकलाई पुनः जोगाउन खोजिएको भन्दै आ क्रो शि त भिडले तो’डफो’ड र आ’गजनी गर्‍यो । घरेलु ति’या’र बोकेको समूहले आइतबार राति साढे ७ बजे महिला प्र’हरी उर्मिला श्रेष्ठको ह’त्या ग’र्‍यो ।
‘२०७४ सालको घ’टनामा कानुनी उपचार खोजेको भए लेटाङमा ग’म्भीर घ’टना हुने थिएन । प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘दुईपटक यौ न दु र्व्य वहा र को घ’टना मिलाएको रहेछ, हिजो मिलापत्र भएका कारण फेरि शिक्षकले दु’र्व्य’व’हार गर्ने आँट गरे ।’ गत शुक्रबार विद्यार्थीको घरमा पुगेका शिक्षक मनोज पौडेलले घरमा एक्लै देखेपछि छात्रालाई यौ न दु र्व्य व हा र गरेका थिए । पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।